ပွောငျး ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ငွေလဲနှုန်း updated 06/07/2022 13:20
ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပွောငျး ။ ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် ပေါင်စတာလင်ပေါင် စျေးနှုန်းယနေ့။
1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် = 1.19 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ပျမ်းမျှငွေလဲနှုန်း။ ဘဏ်များ အမေရိကန်တဒေါ်လာ သို့ ပေါင်စတာလင်ပေါင် ကို transfer အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ ဒါဟာငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းဖို့ရည်ညွှန်းသည်။ 1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.19 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 0.000755 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အားဖြင့်ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်လာသည်။ ပေါင်စတာလင်ပေါင် နှုန်းမှာမနေ့ကကတည်းကထ။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ခြောက်လအကြာ, ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.35 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.38 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.380င် အမေရိကန်တဒေါ်လာ များအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ပတ်ကျော်, ပေါင်စတာလင်ပေါင် -2.16% ဖြင့်ပြောင်းလဲ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းရန်။ တစ်လလျှင် -5.27% - ပေါင်စတာလင်ပေါင် များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။ တစ်နှစ်လျှင် -13.39% - ပေါင်စတာလင်ပေါင် များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပေါင်စတာလင်ပေါင် (GBP) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) Forex လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်အသကျရှငျ
ငွေကြေး ပွောငျး ပေါင်စတာလင်ပေါင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ပေါင်စတာလင်ပေါင် (GBP) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.19 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 5.97 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 11.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 29.84 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 59.69 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 119.37 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 298.44 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 596.87 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
သငျသညျ 11.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဘို့ 10 ပေါင်စတာလင်ပေါင် ရောင်းချနိုင်ပါတယ် ။ ငွေကြေး converter ကိုယခု 25 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 29.84 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ငွေကြေး converter ကိုယခု 50 ပေါင်စတာလင်ပေါင် 59.69 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ သငျသညျ 119.37 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရှိပါက, ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို ၌သင်တို့ကို 100 ပေါင်စတာလင်ပေါင် ။ သငျသညျ 298.44 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရှိပါက, ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ 250 ပေါင်စတာလင်ပေါင် ။ သငျသညျ 500 ပေါင်စတာလင်ပေါင် ရှိပါက, ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ 596.87 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။
ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယနေ့အချိန်တွင် 06 ဇူလိုင်လ 2022
06.07.2022 1.211699 -0.002601 ↓
05.07.2022 1.2143 1.75 * 10-7 ↑
ယနေ့တွင် 500 GBP = 1.211699 USD ။5ဇူလိုင်လ 2022, 1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် = 1.2143 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။4ဇူလိုင်လ 2022 အပေါ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ ပေါင်စတာလင်ပေါင် 1.2143 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ပြီးခဲ့သည့်လကများအတွက်အများဆုံး GBP / USD နှုန်း 05.07.2022 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။2ဇူလိုင်လ 2022, 1 ပေါင်စတာလင်ပေါင် = 1.212101 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။
ပေါင်စတာလင်ပေါင် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းသမိုင်း
ပေါင်စတာလင်ပေါင် နှင့် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေကြေးသင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံများ
ပေါင်စတာလင်ပေါင် ငွေကြေးသင်္ကေတ, ပေါင်စတာလင်ပေါင် ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: £ (₤). ပေါင်စတာလင်ပေါင် ပြည်နယ်: ဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို, ဂရိတ်ဗြိတိန်, မိန်း. ပေါင်စတာလင်ပေါင် ငွေကြေးကုဒ် GBP. ပေါင်စတာလင်ပေါင် အကြွေစေ့: တစ်ပြားမှ.